पीडादायी युरिक एसिड
दिनेश गौतम मंगलवार, श्रावण १०, २०७४
27647 पटक पढिएको
पार्टीमा खानपिनपछि रमाइलो गर्दै सुत्न गएका अशोक थापा (४८) बिहान उठ्दा थला परे । रातभर सञ्चो भएन, उनलाई । भन्छन्, ‘बिहान उठ्दा त खुट्टाको बुढी आैँलामा तन्नाको फेरले छुँदा पनि दुख्न थाल्यो ।’ मोजा लगाउन पनि नसकेपछि खाली खुट्टा अस्पताल गएका उनी चिकित्सकले युरिक एसिडको शंका गरेपछि झस्किए । बुवालाई युरिक एसिड भएकोले आफूलाई पनि भएको उनको निष्कर्ष छ । सामान्यतया पुरुषको रगतमा युरिक एसिडको मात्रा सात मिलिग्रामभन्दा थोरै हुनुपर्छ । महिलाको रगतमा भने ६ मिलिग्रामभन्दा थोरै हुन्छ ।
जुनसुकै उमेरका व्यक्तिलाई पनि सताउने सक्ने युरिक एसिडलाई केही वर्ष अघिसम्म डिजिज अफ दी किङ म्यान अर्थात् धनीहरूको रोगका रूपमा लिइन्थ्यो । तर, अचेल गरीब व्यक्तिहरू पनि यसबाट पीडित भएको पाइएको छ । यसको शुरुवातको लक्षण अधिकांशलाई खुट्टाको बुढी औंलाबाट देखापर्ने गरेको वरिष्ठ हाड जोनी नसारोग विशेषज्ञ डा. सरोजकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन् । महिलाको तुलनामा पुरुष तीन गुणा बढी पीडित छन् । महिलालाई विशेषगरी वृद्धावस्थामा सताउने गरेको पाइएको छ ।
शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा वृद्धि भएमा घुँडा, कुहिनो, कानमा र हात एवं औंलाका जोर्नीमा पनि क्रिस्टल जम्मा हुन्छ । युरिक एसिड रक्तबाट सञ्चालित हुने भएकाले कहिलेकाहीँ आँखामा पनि जम्मा हुन सक्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछन्, ‘कोही आँखा चिलाएको चिलायै भयो भन्ने लक्षण लिएर त कोही कान चिलाएको चिलायै भयो भन्दै उपचार गर्न आउँछन् ।’ युरिक एसिडका क्रिस्टलहरू जोर्नीमा मात्र नभएर कान र आँखाको वरिपरि जम्मा भएर बसेको हुन्छ । अस्पतालमा आउने बिरामीहरूले जिन्दगीमा यस्तो दुखाइ कहिल्यै अनुभव नगरेको भन्दै लक्षण बताउने गर्छन् ।
सुन्निएको ठाउँमा फ्ल्युड (पानी) भरिएको हुन्छ । त्यो पानी निकालेर तुरुन्त फ्लोरोस्कोपी माइक्रोस्कोपमा हेर्ने हो भने युरिक एसिडका क्रिस्टलहरू देखिन्छ । सुन्निएको बेला निकै दुख्छ । ललितपुर, बालकुमारीकी गंगा महर्जन भन्छिन्, ‘घुँडा यति दुख्छ कि खुम्चाउनै सक्दिनँ । सिरानीमाथि खुट्टा राखेर घुँडालाई हातले मुसारिरहँदा दुखाइ कम हुन्छ ।’ युरिक एसिडबारे थाहा नपाउने बिरामीहरूले कुहिना, खुट्टा, घुँडा दुख्यो भन्दै उपचार गर्न आउने गरेको अनुभव चिकित्सकहरूको छ । जोर्नीमा गएर जम्मा हुन्छ, जम्मा हुँदाहुँदा यति धेरै जम्मा हुन्छ कि हड्डी नै खाइदिन्छ । यस्तोमा कहिलेकाहीँ हड्डी नै काट्नुपर्ने हुन्छ । औला नै काट्नुपरेको उदाहरण छ ।
महिलाभन्दा पुरुष पीडित
युरिक एसिडका लक्षण लिएर उपचार गराउन अस्पतालको दैलोमा पुग्नेमध्ये अधिकांश पुरुष हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । उपचार गराउन आउने बिरामीमध्ये करिब ५०प्रतिशत व्यक्तिको खुट्टाको बुढी औंला सुन्निएको हुन्छ । हाड तथा नसारोग विशेषज्ञ श्रेष्ठका अनुसार, पीडितहरूको बुढी औंला हेर्दा सुन्निएर रातो भएको हुन्छ, छुँदा पनि दुख्ने हुन्छ । रगतमा युरिमिया बढ्यो भने युरिक एसिडको मात्रा बढ्न पुग्छ ।
शहरी जीवनशैली र खानपान स्वस्थकर नभएका कारण पनि युरिक एसिडका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। डा. सरोजकृष्ण श्रेष्ठ वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ
हरेक व्यक्तिको शरीरमा युरिक एसिड रहेको हुन्छ । यसको मात्रालाई वृद्धि गराउन खानपान र औषधिले सहयोग पुर्‍याएको हुन्छ । डा. श्रेष्ठका अनुसार शरीरभित्रबाट दुई तिहाइ युरिक एसिड उत्पन्न भएको हुन्छ । एक तिहाइ त बाहिरको खानेकुरा र विभिन्न रोगका औषधि सेवनका कारण पनि वृद्धि हुन्छ । शरीरमा बन्ने एसिड मिर्गौलाले पिसाबको माध्यमबाट शरीरबाहिर फ्याक्न सहयोग गर्छ ।
विलासी जीवन घातक
मिर्गौलाले युरिक एसिडलाई बाहिर फाल्न सकेन भने रगतमा पुग्छ । उच्च प्रोटिनयुक्त खानेकुराले पनि युरिक एसिड बढाउन सहयोग गर्छ । शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा बढाउन रातो मासु सेवन र मदिराले सहयोग गर्ने सम्बन्धित चिकित्सकहरू बताउँछन् । गाउँमाभन्दा शहरमा बस्नेहरूलाई यसले बढी सताएको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । भन्छन्, ‘शहरी जीवन विलासीयुक्त छ ।
जुनसुकै उमेरका व्यक्‍तिलाई पनि सताउने सक्ने युरिक एसिडलाई केही वर्ष अघिसम्म डिजिज अफ दी किङ म्यान अर्थात् धनीहरूको रोगका रूपमा लिइन्थ्यो।
गाउँले जीवन परिश्रमी हुन्छ । परिश्रम गर्दा युरिक एसिडको मात्रा बढ्न पाउँदैन ।’ शहरी जीवनशैली र खानपान स्वस्थकर नभएका कारण पनि युरिक एसिडका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन् । कतिपय व्यक्ति खानपान स्वस्थ हुँदाहुँदै पनि युरिक एसिडले सताएको भन्दै गुनासो गर्न आउने गरेका छन् । डा. श्रेष्ठ थप्छन्, ‘ती बिरामीहरूले अन्य रोगका औषधिहरू खाइरहेका हुन सक्छन् । त्यसले पनि युरिक एसिडको मात्रा वृद्धि गर्न सहयोग गरिरहेको थाहै हुँदैन ।’
अन्य रोगसँग कनेक्सन
मिर्गौला र मुटुरोगसँग पनि युरिक एसिडको निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. सुधा खकुरेलका अनुसार मिर्गौला फेलियर भएका व्यक्तिमा पनि युरिक एसिड वृद्धि हुन सक्छ । मिर्गौलाले युरिक एसिड पिसाबबाट फाल्न सकेन भने रगतमा जान्छ । फलस्वरूप शरीरमा युरिक एसिडको मात्रा वृद्धि हुन पुग्छ । यस्तै, कलेजो र क्षयरोगका बिरामीहरूले खाने औषधिले पनि युरिक एसिडको मात्रा बढाउने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । पिसाब लाग्ने, रगत पातलो गराउने औषधि सेवन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि युरिक एसिडको समस्याले सताउन सक्ने डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । छालासम्बन्धी सोराइसिस भएका बिरामीलाई पनि औषधिका कारण युरिक एसिडको मात्रा वृद्धि हुन सक्छ ।
औंला काट्नुपर्ने जोखिम
युरिक एसिडका बिरामीको समयमै उपचार नभए औंला नै काट्नुपर्ने जोखिम हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘शरीरभित्रैबाट युरिक एसिड बढेको र खानपानबाट पनि वृद्धि गर्न थप सहयोग भएको छ भने बिरामीलाई बढी पिरोल्छ । समयमै उपचार गर्न नआउँदा कतिजनाको औंला काट्नुपरेको छ । अप्रेसन गरेर चिनीजस्तो क्रिस्टल निकाल्नुपर्ने हुन्छ । खानपानमा सजगता अपनाउने र समयमै उपचार गरे युरिक एसिड नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । युरिक एसिड बढाउने खानेकुराहरू नखानु नैै उचित हुने डा. श्रेष्ठको सुझाव छ । विशेषगरी रातो मासु, अल्कोहल सेवन गर्नेहरूले यस्तो बानी त्याग्दा लाभ पुग्छ । युरिक एसिड बढेको कुरा रगतको परीक्षणबाट थाहा हुन्छ ।
घुँडा दुखेर वा जोर्नी दुखेर आउनेहरूमध्ये सबैको युरिक एसिडको लेबल बढी नभएको पनि हुन सक्छ । यसको मात्रा नर्मल हुन्छ । तर, यसखालेजाँच गर्ने व्यवस्था नेपालमा छैन । उपचार गर्ने क्रममा मिर्गौलाको जाँच गर्नुपर्छ । लिभर फङ्सन जाँच गर्नुपर्छ । सीआरपी, ईएसआर हेर्नुपर्छ । युरिक एसिडको मात्रा रगतमा कम हुँदै गयो भने सीआरपी, ईएसआर पनि घट्दै जान्छ । सुगर, लिपिड प्रोफाइल पनि हेर्नुपर्छ । सबैको कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ । कहाँबाट कसरी युरिक एसिड बढेको हो त्यो हिस्ट्री खोज्नुपर्ने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यसपछि मात्र उपचार शुरु गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू
राय छ । पहिला युरिक एसिड घटाउने औषधिहरू दिन सकिन्छ । त्यस औषधिले बिरामीलाई फाइदा पुगेको अवस्थामा औषधि फेरेर युरिक एसिड बढ्न नदिने औषधि पे्रस्क्राइब गर्न सकिन्छ । निको हुन समय लाग्छ । कसैलाई केही वर्षपछि पुनः दोहोरिन पनि सक्ने हुन सक्छ । समयमा उपचार हुने र जीवनशैली व्यवस्थित गर्ने हो भने युरिक एसिड पूर्ण रूपमा निको हुन सक्छ ।